Faa’iidada uu leeyahey kaarka shaqadu. | Brandkii
Brandkii / Business / Faa’iidada uu leeyahey kaarka shaqadu.
Inta badan dadku ma dareemaan faa’iidada uu leyahey kaarka shaqada lakiin marka qof ku waydiiyo nambarkaaga ama iimaylkaaga waxaad markaba raadisaa meel aad ugu reebto xogtaas qofka ku waydiyay, laga yaaba in teleefankagu dansanyahey sidoo kale aad hore u arki waydo warqad iyo qalin kaa ag dhaw, waxa meeshaas ku khasaara fursadii aad kula kulantey qofka aad rabtey inaad xogtada ugu reebto.
Arinta laga yaaba iney inbadan kugu soo noqnoqotey, xalkeeduna ma foga oo kaliya waxaad u baahantehey kaarka shaqada, hadaba kaarka shaqada faa’iidooyinkiisa waxa ka mida ah.
Inaad u muuqatid qof munaasib ah.
Qofka aad la kulantey marka aad siiso kaarkaaga shaqqada waxa uu qofkaasi kuu arkaya qof muhiim ah oo xogtiisa uu u bahanyahey, wuxuuna dareemaya qofkaasi inad tahey qof nidaamsan oo raba inuu xiriir shaqo la sameeyo qofkan.
In aad qofka si fudud ugu reebi karto xogtaada
Laga yaaba hadii aad qofka nambarkaaga ama iimeylkaaga afka uga sheegto inuu qof ilaawo marka uu ka dhaqaaqo wayna adagtahey qofkaas inuu xafido xogtaas lakin marka aad siiso kaarka shaqada qofkaasi markaba waxa uu ula ordayaa kaarkaas inu ku rido meel munaasib ah sida boorsada jeebka ama boorsada kombuyuterka, si fududna kuma lumin karo xogtaas.
In aad soo jiidato qof dareenkiisa.
Qofka aad la kulantey laga yaaba inta hore inuusan wax fiiro ah kusiin lakin marka aad siiso kaarkasga shaqqada uuna arko shirkada ama shaqqada aad ka socoto qofkaasi waxa uu isla markaaba kusiinaya dareenkiisa wuxuna isku dayayaa inuu dhageesto waxa aad usoo jeedinayso.
Kalsooni ayuu abuura.
Hadii aad maanta dhan hayso shirkad hebel ayaan ka socda ama meel hebel ayan ka shaqeeya dadka aad isku cusub tihin way adagtahey inay aminan arintaa lakin marka ay arkaan kaarkagii shaqada oo ku xusanyahey magacaga iyo magaca shaqada aad ka socoto way fududahe iney dadkaasi ku aminan.
Hadaba hadii aad u baahateney in laguu sameeyo kaarka shaqada adiga iyo shaqaalaha ganacsigaaga, shirkada BRANDKII ayaa ku diyaarineysa adeeg dhameestiran oo ka koobaan (Astaan, Agabka shaqada iyo Agabka suuq-geynta) oo dhameystiran si quruxbadan oo xirfadeysana loo nashqadeeyay. Halkan nagala soo xidhiidh/xiriir